Seven izinkinga - impendulo eyodwa: impova bee
250 izingxenye esiyingqayizivele ekhishwe izinyosi kusukela imbali impova, eziningi amino acid, ama-enzyme ehlukahlukene, amavithamini namaminerali - konke bee impova. Lo mkhiqizo eyigugu kubhekwa cishe panacea for ohlwini olude izifo.
Kuyini bee impova
Ukuqoqa imbali impova, bee tamped kuyo wax honeycombs, uthele uju kanye uphawu nokukhawulela ukufinyelela emoyeni. Kukhona nqubo engokwemvelo yokufunda ukuphila acidosis acid ukuvutshelwa, kanye kuvela ukuthi iningi "bee isinkwa", okuyinto izinambuzane abazikhandlayo ulungiselela ukudla yakho, futhi ukudla izibungu. Futhi indoda, yebo, uthola isabelo yayo kwalo mkhiqizo oyigugu. Ukuqoqa ngezindlela ezahlukene. Amaseli ezisele impova ubudala is hhayi egcinwe okwesikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi kuqukethe izinsalela izibungu futhi imifece. Fresh bee impova kungenziwa ezikhishwe amaseli. Kuyinto umkhiqizo oluyigugu kakhulu. Kukhona enye indlela esingathola, okuvame ukusebenzisa abafuyi bezinyosi ukudayisa izimpahla - ugaye esitokisini okuqukethwe bese wengeza uju. Yini embi ngalo lapha ukuthi akunakwenzeka ukuthola emakamu, uma hhayi umkhiqizo wona ambrosia.
Yiziphi izinzuzo bee impova
Uhlu izifo okuyiwona lokhu zemithi yemvelo ngempumelelo, kungabangela Ukungathembani e umthamo yayo. Noma kunjalo wazibonakalisa kwezokwelapha Dynamics omuhle ekwelapheni ezihlukahlukene izifo nge impova. Lena ngokuyinhloko inkinga isimiso somzimba sokuzivikela, iziyaluyalu umzimba, izifo yaleli pheshana emathunjini, kuhlanganise peptic isilonda isifo, kwemizwa uhlelo iziyaluyalu, izifo zenhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, umfutho ophakeme wegazi, wesinye izinkinga potency. Umkhiqizo ine cishe akukho contraindications zingenziwa ngisho abesifazane abakhulelwe kanye nezingane. Futhi ngezinhloso ayeyisimonyo, it is kabanzi. Okuwukuphela iphuzu esiyisixwayiso: abantu iguliswa imikhiqizo bee nempova, bee impova is hhayi Kunconywa.
Izimpendulo ezivela kulabo labawatiko imiphumela yalolu zemithi yemvelo, asishiya singenakho ukungabaza: it is eqinisweni umlingo. ukuthatha njalo abantu bakhe wokuthi ukuqinisa amasosha omzimba, ukwandisa ubungqabavu emzimbeni. Abelaphi bendabuko kanye nodokotela ukuchaza uphulukisa Hyperplasia Prostatic, abanale nkinga, yokutakula okusheshayo cerebral ukugeleza kwegazi emva unhlangothi. Bee impova ayiswe. elimbudumbudu Net kudingeka chaza emlonyeni ngezilinganiso ezithile. Ngokuba nokuvimbela omdala ngokwanele 25-50 amagremu ngosuku, izingane - 1-15 g Uma impova nepepper noju buhlanjululwe, nokuqukethwe kwalo njengoba injalo emsulwa incane futhi yingakho kudingeka athathe esinye isilinganiso. Ingasetshenziselwa njengengxenye buso, futhi umphumela kuyoba obonakalayo ngokushesha kakhulu ukuthuthukisa isikhumba impova nepepper. Abesifazane abaningi bathi leli thuluzi iye yasiza bushelelezi imibimbi emihle futhi rejuvenate isikhumba. Rejuvenation akuyona kuphela epidermis, kodwa futhi wonke umzimba nge yokuvuma njalo kwaleli thuluzi emangalisayo. Kubalulekile kuphela ukwazi ukuthi umkhiqizo uthenge - impova ohlanzekile ngempela, akungeni esikhundleni, okuyinto kangaka emakethe.
Tansy - izakhiwo ezuzisayo zezitshalo
Itshe Tourmaline kwezokwelapha: contraindications izakhiwo yezokwelapha
Ukuzila Ukudla ku Ohanyan Marv: ukubuyekezwa. yokulamba Out Ohanyan
Fresh amazambane juice. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Yekuchumana sendlela cholesterol ephansi amakhambi abantu
Ukwelashwa nokuvikelwa cystitis amakhambi: yini okufanele uwukhethe nokuthi ukuyisebenzisa. amalungiselelo Engamakhambi ekwelapheni cystitis
Absorption esiqandisini - isiqinisekiso othembekile wenduduzo ngamalanga wakho wamaholideyi
Ukuhumusha Iphupho: Iyini iphupho lephunga?
Profiteroles: iresiphi inhlama. cream profiteroles
Alfred Koch. Biography sezombusazwe nomlobi
Indlela qondanisa amazinyo akho?
Belarus: izilwane, nemvelo, nemvelo reserves
Bheka iphupho nencazo: iphupho esihogweni - kusho ukuthini lokho?
Inhloko-dolobha yaseSwaziland. Imali yamasiko nezokuphatha.
Indlela ukugoqa amadombolo kwesokudla? Inhlama ku amadombolo: iresiphi
Avoska design ngezandla zabo, noma indlela yokwenza ethenga ekhangayo?
"Ejenti Undercover": nabalingisi ngesakhiwo Amazwibela Thriller obonisa Mayli Sayrus
Snapchat: indlela yokusebenzisa isicelo futhi kungani udinga khona?